Ra’iisal Wasaare Khayre oo ka qayb galay Kulan Amniga looga hadlayaay – Radio Daljir
Febraayo 25, 2018 8:54 g 0
Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre,Wasiirka Amniga Xukuumadda,Saraakiisha Ciidamada Booliska iyo Nabad sugida iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa galabta booqday xarunta Ciidanka Xasilinta Caasimadda Muqdisho,waxayna kula dardaarmeen xoojinta Amniga caasimadda.
Ciidamada Xasilinta oo horay howlgalo hub ka dhigis ah uga sameeyay magaalada Muqdisho ayaa hadda Hub iyo Ciidan lagu kordhiyay si ay ulaba jibaaraan howlgalka lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda Muqdisho.
Ugu horeyn ayaa madasha waxaa Ciidamada kula hadlay Taliyaha cusub ee Ciidanka Booliska Generaal Bashiir Cabdi Maxamed oo sheegay in muhiim ay tahay sugida Amniga,islamarkaana Ciidamada Booliska habeen kasta qaadayaabn howlgal lagu sugayo Amniga caasimadda Muqdisho.
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Isloow oo madasha ka hadlay ayaa balan qaaday inaan laga ganban Cadowga,habeen iyo maalina u taagan yihiin sidii looga hortagi lahaa weerarada Cadowga.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan ” Injineer Yariisow” oo madasha Ciidamada Xasilinta kula hadlay ayaa marka hore madaxda Qaranka uga mahad celiyay siday uga jawaabeen baaqii ahaa in Ciidamada Xasilinta Caasimadda ay ka howlgalaan meelaha ay ku dhuumanayaan Kooxaha Nabadiidka.
“Anigoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka Benaadir waxaan uga mahadcelinayaa madaxda qaranka ka jawaabidda baaqeenii ahaa in ciidamadda Xasilinta Caasimaddu ay ka howlgalaan meelaha ay ku dhuumanayaan kooxaha nabad-diidka ah oo la sugin inta ay dhib geysanayaan. Shacabka Gobolka Benaadir na wuxuu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo hay’adaha amniga xasilloonida magaalada”,Ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Ugu danbeyntii,Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in shalay shir magaalada Muqdisho ay ku yeesheen Wasiirada iyo Taliyeyaasha Ciidamada laga soo saaray in la sii dardar geliyo sugida Amniga Caasimadda Muqdisho.
Wuxuuna Ciidamada Xasilinta Caasimadda ugu baaqay iney iyagoo foojigan shaqeeyaan.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dadaal ugu jira sidii ay u ciribtiri lahaayeen Kooxda Nabadiidka Al-Shabaab si shacabka Soomaaliyeed ugu noolaadaan Amni iyo Xasilooni.